INGOSI: Qala ngokukhokhela imfundo yezingane ngaphambi kokudla ukotini | News24
INGOSI: Qala ngokukhokhela imfundo yezingane ngaphambi kokudla ukotini
Durban - Usuzophela unyaka, abantu sebazohlukanisa izitokfela kanti namabhonasi asendleleni, kodwa phambi kokujabula ngokweqile, cabanga ngezinto ezibalulekile.
UKUKHOKHELA IMFUNDO: Yize zingakavalwa izikole, kodwa usunalo ulwazi lokuthi yini ezodingeka ngonyaka ozayo. Abantu abayeke ukulinda umzuzu wokugcina ukuze balungiselele isikole. Khokha imali yokufunda, uthenge wonke umfaniswano wesikole odingekayo, uthenge futhi nezincwadi kanye nokunye okuzodingeka.
Uma ingane yakho ifunda kude nasekhaya, xhumana nomalume othutha izingane usheshe umlungisele izishaqane zakhe kusekuhle bese ugcina zonke iziliphu njengobufakazi bokuthi usukhokhile.
Iyacika le nto yokuthi abazali bajahe ukuthengela izingane izampahla zikanokusho, amateku kanye nokunye okubizayo kodwa uma sekuzovulwa izikole useyaqala bagijimisa abantu bafuna ukuboleka imali. Hlelela ikusasa lengane yakho kusekuhle.
Uma wazi ukuthi ingane yakho ayibambi kalula esikoleni, cinga izikhungo ezilekelela izingane ngezifundo zayo bese ukhokha lokhu okufunekayo ukuze uzokwazi ukuthi ikusasa layo ulihlelele ngendlela efanele.
NGAPHEZU KWEMFUNDO zikhona ezinye izinto ongazikhokhela ngaphambi kwesikhathi ukuze wehlise izindleko zakho zonyaka ozayo. Abanye abantu bakhokhela izinto ezifana ne-DSTV ngemali yamabhonasi bakhokhele unyaka wonke. Usuyazi uma kuqala unyaka awubi nayo inkinga yokukhokha uma kuqhamuka izindleko ezingalindelekile.
IZIKWELETU: Uma wazi ukuthi uzothola imadlana engeziwe kodwa ubungakayihleleli, vala amakhadi asezitolo. Ayikho into eyisicefe njengokulandelwa abakwa-Edgars befuna u-R250 wento owayigqoka yaze yaguga.
SHIYA PHANSI indaba yokubukwa, yebo kumnandi uma unemali, uyasho noDr Malinga ukuthi akulaleli uma unemali, kodwa uboqaphela ukujabula kuze kweqe ujabulisa nabantu abangenandaba nawe.
YENZA IBHAJETHI yakho konke ozobe ukwenza ngamaholidi, lokhu kuhlanganisa ezokungcebeleka. Yebo, ifake imali ozoyisebenzisela ukuthenga utshwala, izimpahla zokugqoka, ukudla ezitolo kanye nokukhipha izingane. Iba neqiniso ngendlela ozoyaba ngayo imali ukuze ungathuki uma izibalo zingasahlangani kahle.
BEKA IMALI uma ubona ukuthi iningi kakhulu imali futhi awazi ukuthi uyenzenjani, ifake kwi-32 days account lapho uzothola khona nenzuzo ube usacabanga ngokuthi uzoyisebenzisa kanjani.